ထိုင်းနယ်စပ် မြဝတီမြို့တွင် ဘတ်ငွေဈေး ပြန်လည်ကျဆင်း၍ အရောင်းအဝယ် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာ - Yangon Media Group
ထိုင်းနယ်စပ် မြဝတီမြို့တွင် ဘတ်ငွေဈေး ပြန်လည်ကျဆင်း၍ အရောင်းအဝယ် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာ
မြဝတီ၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့တွင် နိုဝင်ဘာလက ထိုင်းဘတ်ငွေဈေးမှာ ဘတ် ၂ဝဝဝ လျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၁ဝဝ,ဝဝဝ ထိရှိခဲ့သဖြင့် ထိုင်းကုန်စည်များ ဈေးမြင့် တက်ခဲ့ပြီး မြဝတီမြို့တွင် အရောင်းအဝယ်အေးခဲ့ကာ ယခုရက်ပိုင်း တွင် ထိုင်းဘတ်ငွေဈေးပြန်လည်ကျဆင်းလာသဖြင့် ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှု ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာကြောင်း သိရသည်။
”အခု ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ဘတ်ဈေးတဖြည်းဖြည်းပြန်ကျခဲ့ပြီး အခု ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်မှာ ထိုင်းဘတ်ငွေ ၂၁၄ဝ ကို မြန်မာငွေကျပ် ၁ဝဝဝဝဝ ဖြစ်တာကြောင့် အရောင်းအဝယ်ပြန်ကောင်းလာတယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့။ အရင်က ထိုင်းကုန်တွေကို များများဝယ်မတင်ရဲဘူး။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ငွေဈေးကတက်နေတော့ ဈေးရောင်းရတာရှုံးတယ်။ ယခု မှ ပြန်အဆင်ပြေလာတာ”ဟု မြဝတီဘုရင့်နောင်ဈေးကြီးအတွင်းထိုင်း စားသောက်ကုန်များ ရောင်းချနေသော ဈေးသည်တစ်ဦးကပြောသည်။
မြဝတီမြို့ဘုရင့်နောင်ဈေးကြီးအတွင်း ယခင်ထက်စာလျှင် ထိုင်း စားကုန်များဈေးပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့သည့်အတွက် လက်ရှိဈေးနှုန်း များမှာ မမချဉ်စပ်အထုပ် ၃ဝ ပါ၊ ခြောက်ဖာပါတစ်ပါကင်လျှင် ကျပ် ၃၈၇ဝဝ၊ ဗျိုင်းတံဆိပ်နို့ဆီ လေးဒါဇင်ပါ တစ်ပါကင် ကျပ်၃၃၉ဝဝ၊ ၁ဝ ပိဿာဝင် ဆီကော်ပုံးတစ်ပုံး ကျပ် ၁၇၅ဝဝ၊ Jump ဆပ်ပြာမှုန့် ၂၅ ကီလိုဖာကြီးတစ်ပါကင် ကျပ် ၂၉၂ဝဝ၊ M 150 အချိုရည်အလုံး ၅ဝပါတစ်ပါကင် ကျပ် ၁၆၅ဝဝ၊ အာဂျီနိုမိုတိုအိုးတံဆိပ်အချိုမှုန့်အ ထုပ်ကြီးအထုပ် ၂ဝ ပါ တစ်ပါကင် ကျပ် ၇၅ဝဝဝ၊ မိသားစု ငါး သေတ္တာအသေးလေးဒါဇင်ပါတစ်ပါကင် ကျပ် ၄၆၄ဝဝ၊ မြင်းတံဆိပ် ပလတ်စတစ်ဖျာ ၁၂ ချပ်ပါတစ်စီး ကျပ် ၇၉ဝဝဝ အသီးသီး ဈေး နှုန်းများဖြင့် ရောင်းချလျက်ရှိပြီး ရွှေဈေးနှုန်းများအနေနှင့် ထိုင်းရွှေ တစ်ဘတ်သား (၁၉၆ဝဝ)ဘတ်၊ မြန်မာရွှေမီးလင်း ၁၆ ပဲရည် တစ်ကျပ် သား ကျပ် ၁,ဝ၃၅,ဝဝဝ၊ ၁၅ ပဲရည်တစ်ကျပ်သား ကျပ် ၉၇ဝဝဝဝ ဖြင့်ရောင်းချနေကြောင်း သိရသည်။
ချာလီအော်စတင်၏ အပြုအမူကို အက်ဖ်အေမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်
ကလေးဒေသတွင် ခရမ်းချဉ်သီး အထွက်နှုန်း ကောင်းမွန်သော်လည်း ဈေးနှုန်းကျဆင်းနေ၍ အရှုံးပေါ်နေ
မန္တလေး မြို့ဝင်၊ မြို့ထွက်ဂိတ်များနှင့် မန္တလေးမြို့တွင်း သတ်မှတ်နေရာ ၁၈ နေရာတွင် တိုင်းဒေ??
စွန် ဝါသနာရှင်များ စုပေါင်း၍ မန္တလေးမြို့ အောင်ပင်လယ် ကွင်းတွင် စွန်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ
အလုပ်သမားခေါင်းဆောင် သုံးဦး ထိန်းသိမ်းထားသည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အလုပ်ထုတ်ခံ ပန်ဒါချည်မျှ
စင်ကာပူတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၂ဝ၁၆ မှစ၍ အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိ
တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော်၏ မီးပုံးပျံ ပြိုင်ပွဲတွင် မီးပုံးပျံ ၄ဝဝ ကျော် လွှတ်တင် ပြို
သစ်သား ကုန်ကြမ်းဈေး ကြီးမြင့်လာမှုနှင့်အတူ သစ်သားပွတ်လုံးထိုး အပ်နှံသူများ ရှားပါးလာသဖြင?
အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး သုံးဦးအပါအဝင် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း ၁၂ ဦးကို အဂတိလိုက်